အသက် ၂၂ - ၁.၅ နှစ်။ ကျွန်တော် reboot လုပ်တယ်။ သင်၏ ဦး နှောက် On Porn သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော၊ လှပ။ ကြောက်စရာကောင်းသည်
အသက် ၂၂ - ၁.၅ နှစ်။ ကျွန်တော် reboot လုပ်တယ်။ ဤသည်အံ့သြဖွယ်ထူးဆန်းတဲ့လှပသောနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်
သန့်ရှင်းသောအ shit ။ ၆၄ ရက်ကြာပြီးနောက် PornFree နှင့် NoFap နှစ် ၁.၅ နှစ်ရုန်းကန်နေရပြီး၊ ငါ reboot လုပ်လိုက်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုပြောပါရစေ၊ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ထူးဆန်းတယ်၊ လှတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာကြောက်တယ်။
တစ်ဦးကကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသည် Streak ပြီးသားနောက်ဆုံး Streak (ဆိုလိုသည်မှာ။ ငါတော့ဘူးပြန်သွားကြသည်ဘယ်တော့မှမည်) ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါက start ကနေကြောင်းသိသည်။ အကြှနျုပျ၏ကိစ္စများနောက်ဆုံးတော့ပြေလည်နေကြသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီပြန်ဖွင့်, အဘယ်အရာကိုအားကောင်းတဲ့အရာသူကပြောတယ်။ ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုသာယခုငါဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငါဖြစ်၏ဖြောင့်သတိထားမိခဲ့ပေ။
ငါ porn ကြည့်နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါသည်ဤသိတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏လိင်အကြောင်းကို OCD'ing ခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ပြallနာတွေနဲ့ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ (၂၂) နှစ်တာကာလတွေမှာဒီလောက်မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည် 1.5 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့သောဤခရီးတလျှောက်လုံး, ငါအရာအားလုံးကိုလကျခံဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ အပြစ်အနာအဆာ။ အမာရွတ်များ။ စိုးရိမ်မှုတွေ။ မလုံခြုံမှု။
ဒါပေမယ့်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်ကြီးစွာသောအရာတို့ကို။ ခိုင်မာတဲ့။ အစွမ်းထက်နှင့်အသိဉာဏ်။ စည်းကမ်း။ ဆုံးဖြတ်သည်။
ငါ autistic (ရောင်စဉ်တန်း၏ asperger အစိတ်အပိုင်းမှာပို) အချိန်ကြာမြင့်စွာကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဖြေကိုရှာနေခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်ငါဟာထူးချွန်တဲ့ပါရမီရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပုံရတယ်၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိတယ်။ အမြဲတမ်းနားလည်မှုလွဲ။ အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်က (ကျွန်ုပ်၏မိဘများကလုပ်ရန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်) အထူးသဖြင့်သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကစစ်ဆေးခြင်းမခံရသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်လက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်၎င်းသည်ကလေးငယ်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုမတွေ့မချင်းကျွန်ုပ်၏နေရာကိုဘယ်တော့မျှရှာမတွေ့ပါ။ (အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းဟာဘာမှမမှားပေမယ့်ရောင်စဉ်အချို့ကကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝမသင့်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီ 'တံဆိပ်' သို့မဟုတ် 'အဖြေ' ကိုကျွန်တော်လုံးဝမကျေနပ်ခဲ့ပါ။ )
ငါသည်ငါ့နတ်ဆိုးများရင်ဆိုင်ရခြင်းနှင့်အနိုင်ယူဖို့ 1.5 နှစ်အတွင်းအဘို့စစ် တိုက်. ကြနဲ့ကျွန်မအရာ၌နန်းထိုင်ကြသည်။
ဥမင်၏အဆုံး၌အလင်းရှိပြီးသင်ထင်သည်ထက်ပိုနီးသည်။ ကြီးပြင်းလာတာလုံးဝမလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ် အားအင်ပြည့်ဝပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ရန်သင်ရင်ဆိုင်ရမည့်ပြofနာများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်တော့မှရောက်မလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြissuesနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြောက်လွန်းလို့ပဲ။
ပိုကောင်းကိုယ်ကိုကိုယ် subreddits ဤကြင်နာသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေ။ သင်က GUTS သင့်ရဲ့ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရဖို့နဲ့သီလ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဖြစ်လာတယ်။ ကမ္ဘာ့သင်ကိုယ်တိုင်, ဒါပေမယ့်သင့်မိသားစုများအတွက်, သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမယ့်များအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်စေရန်။
ဒီ subreddit ကိုထွက်ဖို့နီးပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့်အညီ၊ နောက်ဆုံးသတင်းနှင့်ဆက်နွှယ်မှုအချို့အထောက်အပံ့များပေးရန်မကြာခဏပြန်လည်လည်ပတ်ပါမည်။ ငါ PornFree ပါ
တစ်ကိုးကားနှင့်အတူဤပုံပြင်ကိုအဆုံးသတ်စေရန်, ငါ, သင်တန်း, ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ထိ မိ. လဲသူကိုအကြှနျုပျတို့အားဤနေရာတွင်အများဆုံးသက်ဆိုင်ကြောင်း Theodore Roosevelt ကနေကိုးကားရွေးချယ်ပါ။
ဒါဟာရေတွက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ သူရဲကောင်းထိမိလဲပုံကိုထောက်ပြသူမဟုတ်ပါ။ အမှားနှင့်အားနည်းချက်မရှိဘဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နယ်ပယ်၌အမှန်တကယ်၌ရှိ၏, သူ၏မျက်နှာကိုဖုန်မှုန့်, ​​ချွေးနှင့်အသွေးအားဖြင့်ထိတ်လန့, ရဲရင့်သောကြိုးပမ်းနေသူသည်တိုတောင်းခြင်းနှင့်တိုတောင်းလာရန်မှားယွင်းသောသူကိုဂုဏ်အသရေ။ သူသည်လုပ်ရပ်များကိုအမှန်တကယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားသူ၊ အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသိပြီးကြီးမြတ်သောဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကိုသိသူ၊ ထိုက်တန်သောအမှု၌မိမိကိုယ်ကိုအသုံးချသူ၊ အဆုံး၌ကြီးမားသောအောင်မြင်မှု၏အောင်ပွဲကိုသိသူဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဆိုးဆုံးမှာသူရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်အနည်းဆုံးတော့အလွန်ရဲရင့်ရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုမရရှိခြင်းကြောင့်သူဟာအောင်မြင်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသူကိုသိပြီးသားချမ်းအေးပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
Theodore Roosevelt ရုစဗဲ့
LINK - ငါ reboot လုပ်တယ်
BY - stulop